Muraayadaha muraayadaha ee khaldan ee Hyde Camo / Madow - Hanukeii
Ururinta muraayadaha indhashareerka ah wuxuu ku dhashay waddada caanka ah Wadada California Hyde. Sawiradeenna muuqaalka waddada kor laga arkay ayaa wali taagan, badda, midab cad iyo buluug xagga dambe, cirka oo cad iyo funicular ayaa nagu soo socota.
Istaag, kormeerida wadadan oo ku taal badhtamaha San Francisco, waxaan ka fikiraynaa xaddiga suugaanta iyo shineemooyinka ku soo safray magaalada; laga soo bilaabo jacaylka iyo sheekada sirta ah ee u dhaxaysa Kim Novak iyo Jimmy Stewart ee Vertigo, ilaa xidhiidhka qoyska ee ugu sokeeya ee u dhexeeya Anne Hathaway iyo Julie Andrews ee Princess ee layaabka.
Waxay nagu dhacday markaa; Maxaa diidaya in la naqshadeeyo muraayadaha indhaha oo ay ku jiraan nuxurka dariiqyada aan jecel nahay ee magaalada oo si buuxda u qaabeeya farshaxanka iyo qaabeynta Ururintayada 'Hyde collection' waxay nuugaysaa oo ay ka tarjumaysaa midabada muusikada, ee dhismayaasha ku hareeraysan, wiishka oo tilmaamaya in dhul-weynuhu u dhammaaday bilaabidda badda iyo maalmaha qorraxda leh ee qorraxdu qaylinayso muraayadaha oo bacda ka soo baxay. Qaabka jirku wuxuu raadinayaa naqshad quruxsan oo miyir leh, oo ku qalabaysan dhammaystir fiiqan meelaha sare ee muraayadaha oo qeexaya qaabka wejiga, dherer iyo nuancing, si qofkii xirtaa uu u dareemo inay ku dul socdaan Buundada 'Golden Gate Bridge', ama ka salaanta dadka deegaanka Hyde Street funicular.
Lombard Pastel / Buluug 44.95 €